michael keating oo war kasoo saaray xiisadda Kheyre iyo Jawaari – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
michael keating oo war kasoo saaray xiisadda Kheyre iyo Jawaari
Ahmed weheliye Gaashaan 17 March 2018
Muqdisho (Mareeg News ) QM, Midowga Afrika, Midowga Yurub, IGAD, Ethiopia, Italy, Sweden, UK, iyo Mareykanka ayaa walaac ka muujiyey xaaladaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee ka jira Soomaaliya, kuwaas oo ay sheegeen inay halis ku yihiin guulihii siyaasadeed, dhaqaale iyo kuwii amni ee la gaaray, islamarkaana ay dhaawacayaan sumcadda Soomaaliya.
Beesha caalamka ayaa ugu baaqday dhammaan hogaamiyayaasha Soomaalida iyo siyaasiyiinta inay ixtiraamaan sharciga dalka iyo dastuurka, ayna u adeegsadaan xalinta khilaafyada jira.
Beesha caalamka ayaa ugu baaqday hogaamiyayaasha baarlamanka iyo xukuumadda inay wada-hadal yeeshaan maalmaha soo socda ayna hab nabdoon oo dastuuri ah u adeegsadaan xalinta khilaafyada jira.
Beesha caalamka ayaa bogaadisay kooxaha iyo shaqsiyaadka isku dayaya inay xaliyaan khilaafyada jira, ayna garab taagan yihiin.
Hadalkan ayaa imanaya ayada oo xildhibaano ka tirsan baarlamanka ay wadaan mooshin xilka looga qaadayo guddoomiye Jawaari, kaasi oo uu gadaal ka riixayo ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Daawo: Wasaarada Amniga & Taliska Booliska oo beeniyay in RW Kheyre uu lahaa amarka ciidamada lagu geeyay Xarunta BF
Turkiga iyo Imaaraadka oo meel xun isla gaaray iyo astaanta wadada safaarada Imaaraadka ee…